MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE SAINT BERDOODLE IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Saint Berdoodle iyo Sawiro
St. Bernard / Poodle Dogs Nooc Isku Daran
Diyaarad u dir Saint Berdoodle da'da 5 sano
Saint Berdoodle maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Saint Bernard iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Yogi the Saint Berdoodle oo 2 jir ah— 'Yogi waa 2 sano jir, lab ah St. Berdoodle. Waxa uu ku jiraa rasaas iyo dhexdhexaad ah . Miisaankiisu waa 120 rodol (54 kg). Waxa uu lahaa qaar ka mid ah tababarka oo doonaa ku dul soco xarig . Isagu aad buu u macaan yahay oo qurux badan yahay, laakiin jilidiisu way weyn tahay wayna weyn tahay wuxuuna ilaaliyaa gurigiisa wuxuuna na ogeysiiyaa marka qof yimaado. Wuxuu ku nool yahay gudaha 14 rodolkeenna. Shih Tzu oo way isla fiican yihiin.
King 'Tut' the Saint Berdoodle at 3 sano jir— 'Tut hadda waa 3-sano jir, 160 rodol wuxuuna u shaqeeyaa Eeyga adeegga ESA. Dadkuu jecelyahay meelkasta oo aan tagno, laakiin wuxuu ilaaliyaa xukunkiisa sida eey shaqeynaya si heer sare ah. Wuxuu ku fiican yahay eeyaha kale sidoo kale wuxuu jecel yahay labadiisa walaalo ah. '
Soshiyaaldimoqoraadiga Pei isku darka pitbull shaybaarka
Tut Saint Berdoodle markay jiraan 9 bilood, culeyskiisuna yahay 120 rodol. qoyskiisa- Waxaan ka helnay Tut qof ka shaqeeya beeraha Florida. Aabihiis wuxuu ahaa cad Poodle miisaanka 68 lbs. hooyadeedna waxay ahayd 120-lb. Saint Bernard . Daqiiqadii aan soo qaadnay, dabeecaddiisu waxay ahayd Bernard oo dhan. Isagu waa macaan yahay, xasilloon, naxariis badan oo gabi ahaanba jecel yahay dadka ... gaar ahaan carruurta. Wuxuu neceb yahay roobka, laakiin wuxuu jecel yahay inuu ka cabo ilaha biyaha maadaama uu dhererkiisu ku filan yahay. Waxaan horeyba ugu qaadnay tababbarka eyda iyo tababar heer sare ah, sidaa darteed waxaan rajeyneynaa inuu ugu dambeynti noqon doono Muwaadin Wanaagsan ee Canine ah. Sagaal bilood waa 120 rodol. oo wuxuu istaagayaa lix cagood markii garbaha nalaga saarayo. Isagu waa caqli badan yahay had iyo jeerna waa hadal haynta dukaamada xayawaanka u fiican iyo jardiinooyinka. Marnaba yeelan maayo nooc kale oo eey ah maxaa yeelay isagu wuxuu leeyahay kan ugu fiican labadaba.
Ku wareeji Saint Berdoodle sida ey yar oo jira 4 bilood
Tut the Saint Berdoodle sida eey yar oo jirta 8 toddobaad, miisaankeedu yahay 23 rodol
Harley the Saint Berdoodle (Eyga St. Bernard / Poodle ee isku jira) ugu yaraan 5 sano jir, culeyskiisuna yahay 108 rodol - Waxaan haysanaa xoogaa arrimaha xasaasiyadda wax, hubin hubin waxa, sidaa darteed wuxuu cunaa ugaadhsiga iyo baradhada macaan si maqaarka looga ilaaliyo arrimaha. '
madow iyo buluug puppy puppy
Harley the Saint Berdoodle (St. Bernard / Poodle ey isku dhafan) ugu yaraan 5 sano jir, miisaankeedu yahay 108 rodol
Harley the St. Berdoodle oo 8 bilood jir ah (Saint Bernard / Poodle mix ey ey) oo culeyskiisu yahay 77 lbs., Oo garabka dhererkiisu yahay 28 '
Harley the St. Berdoodle eey yar oo jirta 4 bilood jir— 'FYI, lugta Poodle-xiiray ee Harley waxay ka timid xididkiisa' IV 'tan iyo markii qaliin looga sameeyay si caloosha iyo mindhicirrada looga saaro sock.
Harley the St. Berdoodle eey yar oo jirta 4 bilood
Harley the St. Berdoodle oo 5 asbuuc jira isaga iyo asxaabtiisa-Harley waa eey bunni ah.
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Saint Berdoodle
Saint Berdoodle Dog Sawirada Taranka 1
isku dhafka sheybaarka tilmaamaha jarmalka
bulldogs ingiriis bunni iyo cadaan ah